ပလီပလာ PR ကြည်စရာမဟုတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ပလီပလာ PR ကြည်စရာမဟုတ်
ပလီပလာ PR ကြည်စရာမဟုတ်
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Sep 8, 2014 in Opinions & Discussion | 17 comments
ပီအာရွေးကောက်ပွဲ စနစ်ပြောင်းဖို့ အာဏှာရ ကြောက်ဖွတ်ပါတီနဲ့ ၂၀၁၅ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ခွက်ပျောက်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီအချို့ လုံးပန်းနေတာ ဗျားတို့သိတယ်နော်။ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တိုင်းမှာ အားသာ၊ အားနည်းချက် ကိုယ်စီမို့ ကာလံ၊ဒေသံ၊ပယောဂံ သုံးခု ယှဉ်ထိုးသုံးသပ်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်။ ဘွားဒေါ်ဂျီး လက်နက်ချ လွှတ်တော်ထဲဝင်တယ်၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ယဉ်ကျေးမှုကို နိုင်ငံရေးအစဉ်အလာ ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်၊ မျှော်လင့်ထားတာတွေ လွှတ်တော်ထဲက ရပါသလား။ ကြံဖန်ပြောကြေးဆို ရတာမို့ ၄၀% အနိမ့်ဆုံးအောင်မှတ် ထားစဉ်းစားမယ်ဗျာ။ ဘာတွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု ရှိလာသလဲ။ သူပြောထားခဲ့တာတွေ ၄၀% ဖြစ်ရဲ့လား။ ဒါက တချက်…
ဘွားဒေါ်က ခြေဥပြင်ဖို့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တင်တယ်၊ ပုဒ်မ ၄၃၆နဲ့ အရှိန်မြင့်တယ်။ အများ တောင်းဆိုသလို ၈၈ပွင့်လင်းအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းတယ်။ သာမန်အားဖြင့်ဆို သူတွက်သလို ဖြစ်တာပဲ။ သို့ပေသိ အာဏှာရ စစ်တဗိုင်း အစိုးမရ တုံ့ပြန်မှုက သူထင်တာထက် ပိုရိုင်းစိုင်းယုတ်မာတယ်။ လူထုက ထင်တာထက် တွေဝေမှုပိုများတယ်၊ ဆင်ခြင်တုံ နည်းတယ်။ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေက ထင်ထာထက် ပိုခြေသွက်၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ပိုကြည့်တယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင် ဘွားဒေါ်ဂျီး ဩဇာ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ကျဆင်းနေတာ ငြင်းမရဘူး။ သို့သော် ဒါကို ကွက်ကြည့်ပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မဲပျံ့သွားမည် ပြောမရ။
တဖက်မှာ စစ်တဗိုင်းအစိုးမရ ဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိ မလုပ်နိုင်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ နေရာအနှံ့၊ ခရိုနီတွေ အုပ်စီးထားမြဲ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားအပေါ် လူထု မယုံကြည်မှု ကျဆင်းမသွား။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာက စာရွက်အပေါ်တောင် ဖြစ်မလာသေး။ ဒါတွေက လေးနှစ်နီးပါး ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ ဘောင်းဘီချွတ် အစိုးမရတရပ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနော်။ အခွန်ဘဏ္ဍာသာ များလာတယ် ဝန်ဆောင်မှု တက်မလာ၊ မြေသိမ်းထားတာတွေ ပြန်မပေးနိုင်၊ ပညာရေး ကျန်းမာရေး နိုင်ငံခြားကသာ မပေးလျင် ဒုံရင်းက ဒုံရင်း…။ ဆိုဒေါ့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးမရ မစွံဆိုတာ သိနိုင်ပြီ။
ဘာလို့ ဒင်းရို့ မကောင်းကြောင်း ပြောနေလဲဆိုတော့ ဘွားဒေါ်ဂျီး ညံ့ချက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ဖို့ပါ။ အခြား ဘယ်မှာလဲ လောက်လောက်လားလား နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံ.. တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာရော အမျိုးသား အတိုက်အခံအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်သူမရှိ၊ ကိုယ့်အခြင်းခြင်းတောင် ကွဲကြပြဲကြနဲ့။ သောက်သုံးမကျတဲ့ ဘောလုံး အသင်းတွေကန်တဲ့ လိဂ်ဖလားပွဲ မြင်ကြည့်ဗျာ။ သောက်သုံးမကျ အနည်းဆုံး အသင်းက ချံပီယန် ဖြစ်မှာပဲ။ လူထုမှာ ရွေးခြယ်စရာ အကန့်အသတ်နဲ့လေ။ အန်အယ်လ်ဒီ အဲလို ဖြစ်မှာပဲ။ ထိန်းရမှာ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ် စိတ်ပျက်မသွားဖို့၊ အချိန်မတိုင်မှီ ပွဲကြည့်စင်က ထွက်မသွားဖို့..။
အန်အယ်လ်ဒီ တင်တဲ့ ခြေဥပြင်ရေးလိုင်းကို စစ်တဗိုင်းအစိုးမရ၊ ကြောက်ဖွတ်တွေက မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ချေဖျက်တယ်၊ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဖို့ လူထုလှုပ်ရှားမှုလုပ်တော့ အချိုးကျရွေးကောက်ပွဲစနစ် ပြောင်းမယ်ဆိုပြီး တန်ပြန်တယ်။ သုံးသပ်ကြည့်လျင် အန်အယ်လ်ဒီက ထိပ်တိုက်တွေ့ရေး လမ်းစဉ်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်သလို ကြောက်ဖွတ်များကလဲ ဖင်ပိတ်ငြင်းဆန်ရေး၊ အဆုံးစွန်ဖိနှိပ်ရေးမူကို ပြောင်းလိုက်တယ်။ ဒီချုပ်က ခြေဥပြင်လျင် အချိုးကျရွေးကောက်ပွဲ ပီအာစနစ်နဲ့ လဲမယ်။ အခြေအနေ သိပ်မဟန်လျင် စစ်သားတမတ်သားကိုတောင် လွှတ်တော်ထဲက ပြန်ရုတ်ဖို့အထိ ကမ်းလှမ်းလာနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် စစ်တပ်တမတ်သားကို မလျှော့ဘဲ ပီအာကြိုးပမ်းချက်ကို ရုတ်သိမ်းပေးနိုင်တယ်။ သူတို့လျှော့လို ဘွားဒေါ်ဂျီး တင်းခံလျင် သဘောထားတင်းမာသူ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်လိုသူအဖြစ် စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်ချီရေးနဲ့ ဖော်လံဖားတွေ အော်ချက်ထုတ်ကြမယ်လေ။ ခုထိတော့ ဘွားဒေါ်ဂျီးက ကြောက်ဖွတ်တွေ တီးတဲ့ ပီအာဆိုင်းချက်အတိုင်း လိုက်မကဘူး။ သူတို့မြင်ချဉ်တာ ဆူဆူပူပူ လုပ်ဖို့၊ ကမူးရှူးထိုး တုံ့ပြန်ဖို့၊ ဆင်ထားတဲ့ ကြိုးဝိုင်းထဲ တက်ထိုးဖို့။ ဘွားဒေါ်က ပြတ်ပြတ်သားသားတော့ ကန့်ကွက်တယ်၊ သို့သော် အပြန်အလှန် ငြင်းခုံမှု မလုပ်ဘူး၊ တဖက်မှာလဲ ဦးရွှေမန်းနဲ့ လွှတ်တော်အတွင်း ဖွင့်ဆော့တယ်။
တားဖာသာတား ထိုင်နေဒါဂို.. ဟွန့်
တိုင်းရင်းသားတွေဖက်က ကြည့်လျင် အရှုံးဖြစ်တယ်။ ပီအာစနစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်း တင်သူ ပုဇွန်တောင် အန်ဒီအက်ဖ် လွှတ်တော်အမတ် ဦးအောင်ဇင်က တနေ့က ပြောတယ်။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ အဲဒီစနစ် မကျင့်သုံးပါတဲ့။ သဘောက အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်တွေ ညီညွတ်မှုကို ခွဲထုတ်လိုက်မယ်၊ ဗမာတွေအများဆုံး ရှိတဲ့ တိုင်းဒေသတွေမှာပဲ အချိုးကျစနစ်သုံးမယ်။ အဲဒီမှာ အန်အယ်လ်ဒီက အများဆုံးရလဲ ကြောက်ဖွတ်တွေက နည်းမျိုးစုံသုံးလို့ ဒုတိယ အင်အားအကြီးဆုံး နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် လွှတ်တော်ထဲဝင်မယ်။ ဒီမိုကရက်တစ် စံနှုန်းတွေကို ကန့်လန့်တိုက်မယ်။ နောက်ပြန်ဆွဲဖို့ ကြိုးစားမယ်။ အန်အယ်လ်ဒီပဲ့ထွက် အန်ဒီအက်ဖ်ကိုလည်း သူကောင်းပြုတဲ့အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနေရာအချို့မှာ ကြောက်ဖွတ်များ လက်ရှောင် ပေးပြီး အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ ဆိုင်ပေးကောင်း ဆိုင်ပေးမယ်။ တဲ့ပြောလျင် ကြောက်ဖွတ်မဲနဲ့ သောက်ကန်းမျိုးခြစ်မဲ အန်ဒီအက်ရလို့ သူလဲ ဒုတိယ အများဆုံးမဲရပါတီအဖြစ် လွှတ်တော်ထဲ မျက်နှာပြောင်တိုက် ဝင်ထိုင်ခွင့်ရမည်။
တိုင်းရင်းသားများ တောင်းဆိုနေတဲ့ ပြည်နယ်တကျပ် ပြည်မတကျပ်၊ ဗမာတကျပ် တိုင်းရင်းသား တကျပ် တန်းတူညီမျှ ဆက်ဆံရေး မူကနေ လွဲထွက်သွားမယ်။ ပြည်နယ်တွေမှာ ပီအာမသုံးတာ ပြည်နယ်-ပြည်မ၊ ဗမာ-တိုင်းရင်းသား ခွဲခြားမှု မဟုတ်ဖူးလား။ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘဲ တပြေးညီ နိုင်ငံသား အတွေးအခေါ် အသစ် ကြိုးပမ်းမည်ဆိုလျင် ပြည်နယ်ပြည်မ ခွဲခြားတဲ့ ပီအာရ်စနစ်သည် မူနဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင်နေပြီ။
ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြမလဲ..။ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်များမှာ အကြံကိုယ်စီ ရှိပါမည်။ အရေးကြီးတာ သက်လုံ ကောင်းဖို့… လူထုက ရဲရင့်ရမယ်၊ စည်းလုံးရမယ်၊ နားမယောင်ရဘူး၊ အတိုက်အခံ လှုပ်ရှားသူ အမာခံများ သတ္တိရှိရမယ် ပြတ်သားရမယ်၊ ဆင်ခြင်တုံ မမဲ့ရဘူး။ ရှစ်လေးလုံး တိုက်ပွဲတုံးက နွားကွဲလို့ ကျားဆွဲ ခံခဲ့ရပြီ။ နောက်တခါ အကွဲမခံကြနဲ့၊ ထပ်အကိုက် မခံကြနဲ့။ အားလုံး ညီညွတ်ပြီး စုစုစည်းစည်းနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ဘာရေးညာရေး အာဃာတတွေ ခဏဘေးဖယ်လို့ တသက်မှာတခါ ရခဲတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် စု ကို ဝန်းရံအားပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကွ…
နောက်ဆက်တွဲ။။ ပို့စ်ရေးအပြီး RFA တက်ဖတ်လိုက်တော့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ဖြစ်ကြောင်း ဖတ်ရတယ်။ ဒါလဲ ပီအာရ်နဲ့ ဆိုင်လိမ့်မည်။ နိုင်ငံရေးမှာ တိုက်ဆိုင်မှု မရှိကောင်းလေ..။ ကြားဖြတ်လုပ်လျင် ဘွားဒေါ်ဂျီး နည်လှည့် စည်းရုံရေးဆင်းမည်.. အဲဒီမှာ ပီအာရ်စနစ် ကန့်ကွက်ရေး အသိအမြင် လူထုအကြား ပိုနိုးကြားလာမည်။ ကြောက်ဖွတ်အဖို့ ရှုံးမည့်အတူတူ မိအေးနှစ်ခါနာ ဖြစ်မှာမို့ သောက်လုပ်လည်းမရှုပ်၊ ဘွားဒေါ်ကိုလည်း ခြေချုပ်ပြီးသားဖြစ် လုပ်သည်ယူဆပါဂျောင်း…။ ငါကွ (ဒုတိယမ္ပိ)
အာဏှာရ စစ်တဗိုင်း အစိုးမရ တုံ့ပြန်မှုက သူထင်တာထက် ပိုရိုင်းစိုင်းယုတ်မာတယ်။
လူထုက ထင်တာထက် တွေဝေမှုပိုများတယ်၊ ဆင်ခြင်တုံ နည်းတယ်။
အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေက ထင်ထာထက် ပိုခြေသွက်၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ပိုကြည့်တယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင် ဘွားဒေါ်ဂျီး ဩဇာ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ကျဆင်းနေတာ ငြင်းမရဘူး။
ဒီစကားလေး ကို အတော်လေးသဘောကျ ပါတယ် မောင်မောင်ကြောင်။
တလောက ရုရှား ကို စီးပွါးပိတ်ဖို့ UK က သူများ ကိုသာ တိုက်တွန်းနေတာ သူ့နိုင်ငံ က ရောင်းနေဆဲ ဟာတွေ ကိုတော့ မသိမသာ လွှတ်ထားတာဘဲ။
ကိုယ့်နိုင်ငံ စီးပွါးရေး ထက် တစ်ခြားက ဘာအရေးကြီးမှာလဲ။
ဒါလဲ ဖြစ်သင့်တာဘဲ လေ။
ဒါပေမဲ့ Mr Prime Minister က ဒီ စီးပွါးရေး အတွက် သူ့အိတ်ထဲ ကို ထည့်တာမဟုတ်ဘူး။
နိုင်ငံစီးပွါး ကို လုပ်တာမျိုး။
တကယ်က ကိုယ့်ပြည်တွင်း အား ကိုဘဲ ကိုယ်ရှာရမှာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် လဲ သူ ရဲ့ ပါဝါ ကျနိုင်တယ်/ကျတော့မယ် ဆိုတာ “တိုင်းပြည် Icon” အကျယ်ချုပ်ခံ ဘဝ ကနေ “လွှတ်တော်အမတ်” ဘဝ ပြောင်း လိုက် ကထဲ က သိပြီး နေမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။
၂၀၁၅ မှာ ဘာမှမပြောင်းလဲ သူကတော့ ဇွဲရှိရှိ နဲ့ သူ့တာဝန်ကို ကျေအောင် သူထမ်းသွားမှာပါ။
သူ့ တစ်ကိုယ်စာ အတွက်တော့ ထပ်ရှုံးစရာ ဘာမှ မရှိတော့ ပါဘူး။
ဒီလို အရေးကြီးတဲ့ အချိန် မှာတောင် အနေအထိုင် အစားအသောက် မဆင်ခြင်နိုင်ဘဲ ရသလောက် သရဲမရဲ စီးတာ တွေ
ဒီလောက်တောင် အပါး အနပ် မရှိဘဲ ကိုယ်ရှိန်မသတ်နိုင် အောင် လောဘတက် နေနိုင်တာ တွေ
ဘယ်လောက် အသိဉာဏ်တုန်း တယ် ဆိုတာ ပြနေတာ တွေ
အာဏာ ဘယ်လောက် ကြီး တယ် ပြနေတာ တွေ
ဒါတွေကို လက်တွေ့ ကို မြင်နေပါရက်နဲ့ ….
တစ်ယောက်ချင်း တာဝန်မကျေ ကြမဲ့ ကျွန်မ တို့ တွေ သာ တစ်ယောက် က တစ်ယောက် ကို လက်ဆင့်ကမ်း နေမဲ့
ဒီ အာဏာရှင် စနစ် ကြီးအောက် မှာ
ဒုက္ခတွေကို ဖြစ်/ပျက် မှတ်ပြီး တရားပေါက်အောင် ရှာကြဘဲ ရှိတယ်။
ဪ ဒါထက် ကြောင်ကြောင် …
ဇီဇီဆာဆာ ခေါင်းစဉ် ကို မှီငြမ်း ခ ဒေါ်လှ တစ်ရာ ကျ ပါတယ်။
(သများလဲ ဂါးဂါး တို့ နဲ့ အပြိုင် ခေတ်မှီအောင်)
လွန်ခဲ့ တဲ့ အနှစ် ၂၀ ကထဲ က လူကြီးလူငယ် မရွေး စာတတ် ပေတတ် အပါအဝင် ကျမ မေးမေးကြည့် ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ရ လာရင် ဘာ အကျိုး အမြတ် ရလာမလဲ လို့။ သူတို့ ဒီမိုကရေစီ ကို ဘယ်လို နားလည် ထားလဲ သိချင် လို့ပါ။ အများ ဆုံး အဖြေကတော့ “ဘာမဆို လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ ရမယ်” တဲ့။ နောက် ကော လို့ ဆက်မေးပြန်ရင် ကိုယ့် လုပ် ပိုင်ခွင့် တွေ အကုန်ရမယ် တဲ့။ ဟုတ်ပြီ။ ကိုယ့်ရန်သူ ကိုလဲ သူ့ လုပ် ပိုင်ခွင့် တွေ အပြည့် ပေးရ မှာပေါ့ ဆို လိုက်ရင် ဘာမှပြန် မပြောတောင် မျက်နှာပေး က ချက်ချင်း တင်းသွားတာဘဲ။ ဟုတ်ပေ့။
By Wyn Tin Tut ( FB)
ကျနော်လည်းးး ကြောင်ကြောင့် ရဲ့ ကက်ကက်လန်ကို ယူ သုံးးးဖူးးတယ်။
သမ္မတကြီးက ကောင်းရှာပါတယ် ….
ဟိုးတုန်းက သမ္မတမဖြစ်ခင်ကတည်းက မြစ်ဆုံဆည်ကြီးတည်ဆောက်တာကို အားကျိုးမာန်တက် လေ့လာ အားပေးခဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့် သိပ်လေးစားရတယ်။
ဟော … သမ္မတ လည်း ဖြစ်ရောဗျာ … မြန်မာတပြည်လုံး မြစ်ဆုံဆည်ကြီးကို ၀ိုင်းဝန်းကန့်ကွက် အုံကြွလာချိန်မှာ ပြည်သူ့အတွက် ရပ်တည်ခဲ့ပြန်တယ်။ မြစ်ဆုံဆည်ကြီးကို သူ့သက်တမ်းအတွင်းမှာ ရပ်နားထားဖို့ ကတိတွေပေးတယ်။ ပိုပြီး လေးစားရပြန်ရောဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ လယ်စိုက်မလိုလို လုပ်တော့လည်း ကျုပ်တို့ တတိုင်းပြည်လုံး နင်းပြားတွေဘ၀ကို စာနာလှချည်လားလို့တွေးရင်း မျက်ရည်များတောင် လည်မိတယ်။
ဒါတင်မက အဆင်ပြေရာပြေကြောင်း မြန်မာပြည်မှာ OIC ရုံးစိုက်မယ်ဆိုတော့လည်း ပြည်သူ့အနာဂါတ်ကို ရှေးရှုပြီး ပြည်သူနဲ့တောင် မတိုင်ပင်ပဲ ခွင့်ပြုရှာတယ်။ တယ်လည်း အမျှော်အမြင်ကြီးတဲ့ သမ္မတကြီးပါ။ တဖြည်းဖြည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂါတ်ကို ဒီလို သမ္မတကြီးရဲ့ လက်ထဲပုံအပ်ရတာ သိပ်ကို ဂုဏ်ယူလာမိတယ်။ ထပ်လေးစားရတယ် သမ္မတကြီးရယ်။
တချို့နားမလည် ပါး မလည် ပြည်သူတွေက No OIC ဆိုပြီး ဆန္ဒတွေပြ အော်ကြ ဟစ်ကြတော့လည်း နှလုံးမှာ စက်ထည့်ပြီး အသက်ရှင်နေရတဲ့သမ္မတကြီးမှာ ချက်ခြင်းပဲ အများဆန္ဒကို ရှေ့တန်းတင်ပေးရှာတယ်။ OIC ကို … ” မလာပါနဲ့ ” .. “အချစ်ရေ မလာခဲ့နဲ့” “နင်မသိတဲ့ အပြင်ကလက်တွေ့ဘ၀ဟာ အန္တရာယ်သိပ်များလွန်းတယ် x x x” “မလာနဲ့ ….. ” ဆိုပြီး မျိုးကြီးဆိုသလို ပရိသတ်ရှေ့မှာ ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ဆိုပြလိုက်တော့ … ဘာပြောကောင်းမလဲဗျာ .. ကျုပ်တို့မှာ ပြတ်သားလွန်းတဲ့သမ္မတကြီးကို ကြည့်ပြီး မျက်ရည်တွေရော နှပ်တွေရောထွက်တဲ့အထိ ချီးကျူးအားပေးလိုက်ရတာ။ ဒီလို ပြည်သူ့ဆန္ဒအလေးထားတဲ့ သမ္မတကိုမှ မလေးစားရင် ဘယ်လိုလူကို လေးစားရမှာလဲ ဦးနှောက်ကလေး သုံးပြီး စဉ်းစားကြသင့်တယ်။
လက်ပတောင်းတောင် ဆိုရင် လည်း သမ္မတကြီးပါလာရင် အိုအိုင်စီ လို ပြတ်သားလိုက်မိမှာ။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းသက်ညှာတဲ့အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုဖြေရှင်းခိုင်းဖို့ စီစဉ်လိုက်တဲ့သမ္မတကြီးရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်က နည်းနည်းနောနောလားဗျာ။ မီးလောင်သွားတဲ့ သံဃာတော်တွေအတွက်တော့ သမ္မတကြီးခမျာ ၀မ်းနည်းလွန်းလို့ ဘာသံမှတောင် ထွက်မလာရှာတော့ဘူး။ ကျုပ်တို့အားလုံး သိပါတယ် သမ္မတကြီး။ အဲ့ဒီ သံဃာတော်တွေအတွက် သမ္မတကြီး ရင်ထဲမှာ ရှိုက်ကြီးတငင် ကြိတ်ကြိတ်ပြီး ရှိုက်နေမယ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့သိပါတယ်။ အကြည်ညို မပျက်ပါဘူး သမ္မတကြီး။
သမ္မတကြီးရဲ့ စေတနာနဲ့ ၂ သိန်းဖုန်းတွေ ချပေးတော့လည်း ကျုပ်တို့ပျော်ရတယ် သမ္မတကြီးရဲ့ … ဖုန်းကဒ် တစ်ကဒ်ကို ကျပ်ငွေ ၂သိန်း (အမေရိကန် ဒေါ်လာ နှစ်ရာကျော်) ပေးဝယ်လို့ရအောင် စေတနာထားခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ သဘောထားဟာ ဘယ်လိုအရာမျိုးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရမယ် မသိအောင်ကို လေးစားစရာကောင်းနေပါပြီ။
ဘင်္ဂလီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ နယ်စပ်က လ၀က လို လူစာရင်းတွေရှိတဲ့ရုံးမီးလောင်သွားတာလည်း သမ္မတကြီးလက်ထက်မှာပဲဆိုတော့ သမ္မတကြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာပဲ ဆိုပြီး ၀မ်းနည်းမိတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ရေပိုင်နက်ကိစ္စမှာလည်း မြန်မာက အရှုံးပေးလိုက်ရတော့ သမ္မတကြီး စိတ်ဓါတ်များ ကျနေမလားလို့ တွေးပူမိတယ်။ အိုဘားမားလာတော့ သမ္မတကြီးက ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းကို ခင်းပေးဖို့တောင်းတာကြည့်ပြီး လေးစားမိပြန်ရော။ ပြီးရင် သမ္မတကြီးတို့အဖွဲ့က အမေရိကန်ခင်းတဲ့လမ်းပေါ် တရုတ်ပန်းပင်တွေ စိုက်ပြီး အလှဆင်ကြဦးမှာကို တွေးမိတော့ ပိုပြီးအထင်ကြီးတယ်။ မြန်ပြည်တစ်ခွင်ကို သာယာစေချင်တဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ သဘောထား … သူတောင်းစားလို့ အပြောခံပြီး နိုင်ငံတကာလှည့်ပတ်တောင်းရမ်းခဲ့တဲ့ အနစ်နာခံမှုတွေကို မြင်ရတော့ လေးစားလို့မဆုံးဘူး။
ခေါင်းလောင်းကိုဆယ်နေတာကိုလည်း အပြုံးနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာ အားရစရာပါ။ သမိုင်းအမွေအနှစ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ကို မြင်ရတော့ အားကျတယ်။
ဒီလို ကိစ္စတွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေချိန်မှာ တစ်လတစ်ခါလည်း အချိန်မှန် မိန့်ခွန်းပြောရသေးတယ်။ ကင်းထောက်ဆိုလည်း ထောက်ရသေးတယ်။ နွားနို့သောက်ဖို့လည်း စစ်ရေးအမြင်ရှိရှိ မဟာဗျူဟာကျကျ ကလေးငယ်တွေအတွက် အနာဂါတ်လမ်း ဖန်တီးပေးရသေးတယ်။ အကြံပေးတွေနဲ့ တိုင်ပင်ရသေးတယ်။ အနာဂါတ် မုန့်ဟင်းခါးဆိုင် ၊ နဂါးမောက်သီးခြံ စသည်ဖြင့် …. စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံ၍ အခြား စီးပွားရေးကဏ္ဍများကို ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့လည်း ကြံစည်ရသေးတယ်။
ဟော … အခု ကြည့် … လူကိုလူချင်းစာနာပြီး ဘင်္ဂလီတွေ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်။ ဟိုးတုန်းက ဒီဘင်္ဂလီတွေကို တတိယနိုင်ငံတွေ ပို့ပေးမယ်လို့ သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့ပေမယ့် လူသားချင်းစာနာတတ်တဲ့ သမ္မတကြီးမှာ အပြောနဲ့အလုပ် မညီနိုင်ခဲ့ရှာဘူး။ ဒီလို စာနာစိတ်ပြည့်တဲ့ သမ္မတကြီးကို ရရှိတာ ကျုပ်တို့ပြည်ကံကောင်းတာပဲ။ နည်းနည်းပါးပါး မီးစလေးတွေ ထပြီး မီးမွှေးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာရင်တော့ … သမ္မတကြီးအနေနဲ့ အရင်လိုပဲ ခရီးလေးဘာလေးထွက်ပြီး နားလိုက်စေချင်တယ်။ ကျုပ်တို့ လေးစားရတဲ့ သမ္မတကြီးကို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေချင်လို့ပါ။
( p.s နောင်ဆိုရင် တိုင်းပြည်အပေါ် အရမ်းမကောင်းပါနဲ့တော့ သမ္မတကြီး။ သမ္မတကြီးဘက်က မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လွန်းလို့ပါ)
မြန်မာပြည်ကို.. ကယ်တင်ဖို့.. စစ်ယူနီဖောင်းကြီးချွတ်.. ထမ်ိန်.. အဲ..အဲ.. ထမိန်ဆင်ပုဆိုးကြီးဝတ်ပြပြီး.. ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကနေ.. ဦးပြောင်.. အဲ…အဲ.. ဦးပြောင်းပေးလိုက်ရတဲ့… သမ္မတကြီးစေတနာကို.. ထည့်မပြောတာ.. စိတ်နာသဗျာ…။
ဒါတောင်မှ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ ကြက်ဆူပင်တွေကို မနှုတ်ပဲထားတာတွေ ထည့်မပြောရသေးဘူး…
သာသနာပြုပြီး စိန်တစ်လုံးစိုက်တာ မပြောရသေးဘူး…
သုံးသိန်းလောက်ကို အပရိက သဘောထားပြီး ၀န်ထမ်းတွေဘ၀ စာရိတ္တပိုင်းကို မြှင့်တင်ပေးတာတွေ မပြောရသေးဘူး….
၂၀၁၁ စက်တင်ဘာတွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က တရုတ်နိုင်ငံမှ ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ မြစ်ဆုံ ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို ခေတ္တ ရပ်နားလိုက်ရာ အလှည့်အပြောင်းတခုဟု ဆိုရမည်။ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပို့လွှတ်သည့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကြောင့် ၇၀ဝ စတုရန်း ကီလိုမီတာထက် မနည်းသော သစ်တောမြေများ ပျက်စီးခဲ့သည်။ ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အတွင်း အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားကိုယ်တိုင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ် မေလပိုင်းတွင်လည်း သမ္မတ အိုဘား မားက “မြန်မာနိုင်ငံသာ အောင်မြင်ခဲ့ရင် ကျနော်တို့ အတွက် မိတ်ဖက်ကောင်း နိုင်ငံတခု ထပ်ပြီး တိုးလာမှာပါ” ဟု ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် သမ္မတ အိုဘားမား ပြောကြားခဲ့သည့် “အောင်မြင်မှု” ဆို သည်မှာ “တိုင်းရင်းသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး” နှင့် “တိုင်းပြည်၏ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး” ကိစ္စရပ်များကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ “အာရှ ဗဟိုချက်” ဗျူဟာအရ အာရှအရေးကို အထူး စိတ်ဝင်စားလျက် ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေး လျှော့ချလိုက်ခြင်းသည် အရေးပါသော အချက်တခု ဖြစ်လာသည်မှာ ငြင်း၍ မရပေ။
တဖက်တွင်လည်း တရုတ် နိုင်ငံမှ လက်နက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူများက မြန်မာနိုင်ငံရှိ အင်အားကြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် “ဝ” တိုင်းရင်းသား လက် နက်ကိုင်များထံ ခေတ်မီလက်နက်များ ရောင်းချပေး နေသည်။
“ဝ” တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်တွင် ပင်မတပ်နှင့် အရန်တပ် အပါအဝင် လူအင်အား ၃ သောင်းရှိ သည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ HIS/Jane’s မှ စစ်ဘက်ရေးရာ ဆန်းစစ်လေ့လာသူ အန်ထော်နီ ဒေဗစ် (Anthony Davis) ၏ လေ့လာချက်အရ “ဝ” ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) တွင် တရုတ်နိုင်ငံလုပ် Type 81 မောင်း ပြန်ရိုင်ဖယ်၊ Type 69 ပခုံးထမ်းလောင်ချာ၊ စက်သေနတ်ကြီးများ၊ လေယာဉ်ပစ်အမြောက်၊ Recoilless ရိုင်ဖယ်နှင့် ၁၂၀ mm နှင့် အထက် မော်တာများ ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံထုတ် HN-5 series, Man Portable Air-Defense System (MANPADS) များလည်း ဝယ်ယူထားသည်ဟု သိရသည်။
ဒေးဗစ်၏ ပြောကြားချက်အရှUWSA တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသည့် ကျည်ကာကား အမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အတွက် အသုံးပြုနိုင်မည့် ရဟတ်ယာဉ်များလည်း ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မည်သည့်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ ထိုကဲ့သိုသော စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း မရှိပေ။
UWSA သည် မြန်မာအစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံက ၎င်းတို့အား စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ပုံမှန် တင်သွင်းရောင်းချနေခြင်းမှာ ထူးခြားချက်တခု ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၀-၁၉၇၀ ခုနှစ်များက တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထောက်ပံ့မှု ရရှိခဲ့သော ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီသည်ပင်လျှင် ယခု UWSA ကဲ့သို့သော စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ မရှိခဲ့ကြောင်း လည်း ဒေးဗစ်က ဆိုသည်။
နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သော အစည်းအဝေးပွဲမှာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်က အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ထောက်ခံ ပံ့ပိုးမှု ရယူကာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဗျူဟာကို အားပြိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုမှာလည်း အရာမရောက်ခဲ့ပေ။
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အချင်းချင်း အကြောင်းခြင်းရာ တခုခုကြောင့် မဖြစ်မနေ ထိန်းညှိမှုများ ကြုံရသည့် အခါတွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ် အရေး သာမက မြန်မာ့အရေး တွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံက အသာစီး ရသွားဖွယ်ရာ ရှိနေသည်။
(၂၀၁၄ ဩဂုတ် ၁၂ ရက် Yale Global တွင် ဖော်ပြထားသည့် Bertil Lintner ၏ ASEAN Paralysis Gives China Free Hand in South China Sea ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်သည်)
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုမူလရေးဆွဲ ပုံဖော်ခဲ့သူများသည် ယခုတစ်လော တစ်တိုင်းပြည်လုံးလှုပ်ခတ်နေသည့် PR စနစ် (အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်)ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်မဟုတ်။ FPTP ခေါ် (မဲအများဆုံးရသူ အနိုင်ယူစနစ်) ဖြင့်သာ ကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်သွားရန်ဖြစ်ကြောင်းကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း(၉)ပုဒ်မ-၃၉၃(က)(ခ)၃၉၄(က)(ခ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များပါအရလည်းကောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များဖြစ်သည့် ပုဒ်မ-၃၉၆(ခ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရလည်းကောင်း အထင်အရှားတွေ့မြင်နေရပါသည်။
အထက်ပါ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရဆိုသော် မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုမှ မဲဆန္ဒရှင်များနှင့် လွှတ်တော်အတွင်းသို့ သူတို့၏ရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုဖြင့် ရောက်ရှိသွားခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ်တို့၏ ဆက်သွယ်ချက် ပဋိညာဉ်များကို တင်ကူးဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ PR စနစ်သည် လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကိုက်ညီသည့် ရွေးကောက်ပွဲစနစ်မဟုတ်ကြောင်းပင်။ သို့ဆိုလျှင် ယခုတလော လွှတ်တော်ထဲအထိ ပေါက်ရောက်ဆုံးဖြတ်နေသော PR စနစ်ကို ကျင့်သုံးမည်ဆိုပါက မလွဲမသွေ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ရတော့မည်ဆိုသည်ကို သိထားရပါလိမ့်မည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယခုကာလဝန်းကျင် ဖတ်ရှုနေသောသတင်းစာ ဂျာနယ်များပါ PR စနစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်းပါးများတွင် အစိုးရနှင့်ပတ်သက်နေသည့် နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့မှ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့၏ မဖြစ်မနေကျင့်သုံးသင့်သယောင် ထောက်ခံရေးသားချက်များ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ချက်များအား ဖတ်ရှုနာကြားရသလို အခြားတစ်ဖတ်မှလည်း မကျင့်သုံးသင့်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲသည်အထိ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း စသည်စသည်ဖြင့် ပြန်လှန်ရေးသားမှုများကိုလည်း ဖတ်ရှုနေရပါသည်။
နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူ စာရေးဆရာတစ်ဦးဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၌ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး NDF မှ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း၏ စဉ်းစားချက်များကိုတင်ပြထားပါသည်။ မဆန်းပါ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရှုံး တစည ကလည်း အလားတူ PR သာရှိခဲ့ရင် အဲဒီတုန်းက အဆင်ပြေတာပေါ့ ဟူသည့်အပြောမျိုးကို တစညတာဝန်ရှိသူများ၏ ရေဒီယိုမှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခန်းအသံလွှင့်ချက်များကိုလည်း ကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤသို့သောအကြောင်းများကြောင့် PR ကို မဖြစ်မနေ ပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြိုးစားနေကြသည်ဆိုလျှင်ဖြင့် ရှုံးသူတို့၏ မချိတင်ကဲစကားနှင့်ပြောသမျှကို ပုံရိပ်တူ သံတူထပ်ပြ ပြောဆိုနေကြခြင်းမျိုးမှာ နိုင်ငံရေးအကြံပေးဆိုသူတို့အတွက်ကတော့ မပြောသင့်ဟုထင်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု၏ အနိုင်အရှုံးဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးပါတီ၏ပုံရိပ် ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်၏ မဲဆန္ဒနယ်အပေါ်အကျိုးပြုနိုင်စွမ်းနှင့် နောက်ဆုံးရှင်းရှင်းဆိုရလျှင် မဲဆန္ဒပေးသည့်ပြည်သူတို့၏ လွတ်လပ်သည့်ရွေးချယ်ခြင်းအပေါ် မူတည်၍သာဖြစ်သည်။ နိုင်လိုသော် ပြည်သူ့အပေါ်မလိမ်မညာဘဲ ရိုးသားစွာပြောဆိုစည်းရုံးချဉ်းကပ်ပြီး ထောက်ခံမဲတောင်းဆိုဖို့သာရှိမည်။ သို့တိုင် နိုင်ငံရေးအကြံပေးတို့က ယခုလိုပြောဆိုရေးသားနေရသည့်အခြေ ရောက်နေသည်ဆိုလျှင်ဖြင့် အကြံပေးဆိုသူတို့၏မရှိမဖြစ်အရည်အချင်းဖြစ်သည့် အရှည်မျှော်တွေးပြီးပြောဆိုသည့် အကြံပေးစကားဖြစ်ပါသည်ဟုသာ ဆိုရတော့မည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအာဏာရပါတီအတွက် ကြိုကန်သည့်လုပ်ရပ်များဖြစ်သည်ဟုသာ ပြောရပါတော့မည်။ ရှုံးမှာကြောက်ပြီး ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ်မရှင်းပါဘဲ အခြားမဆိုင်သူပွဲစားများက ကိုယ်စားဝင်ရှင်းပေးနေသည့်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည့် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံး၌ PR အဆိုတင်သူမှာ NDF ကချည်းဖြစ်နေခြင်းကလည်း အာဏာရပါတီ၏ ကြိုတင်သူရဲဘောကြောင်သည့် လုပ်ရပ်များဟုသာ မြင်နေရပါသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို အခြေခံမူချခဲ့သူများ ကနဦးရေးဆွဲခဲ့သူများ ဗိသုကာကြီးများ၏ မူလစဉ်းစားချက်ကဖြင့် သည်လိုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ယူဆခဲ့ပုံမရ။ တိုင်းပြည်၏နိုင်ငံရေးအဝန်းအဝိုင်းအတွင်းမှ တပ်မတော်ကိုဘယ်တော့မှ ဖယ်ထုတ်လို့မရအောင် [ပုဒ်မ-၆(စ)] သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကို စစ်တပ်က ကာလုံနဲ့လှုပ်မရအောင်ထိန်းချုပ်ဖို့ [ပုဒ်မ-၂၀၁] ဒါမှမရသေးရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိတဲ့ စစ်တပ်ကအခြေခံဥပဒေအရ တရားဝင်အာဏာသိမ်းခွင့်ရအောင် [ပုဒ်မ-၄၁၀ မှ ၄၂၀ ထိ] လုပ်ထားတဲ့အပြင် ကိုယ်မလိုလားတဲ့သူကို တစ်သက်တာအာဏာမရအောင် [ပုဒ်မ-၅၉(စ)] ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုမကျေနပ်လို့ ပြင်ချင်ကြရင်တောင် ပြင်မရအောင် ကမ္ဘာပေါ်မှာပြင်ဖို့အခက်ဆုံးဥပဒေအဖြစ် [ပုဒ်မ-၄၃၆] နှင့် စီစဉ်ထားသည့်အပြင် စစ်တပ် ၂၅% လွှတ်တော်တွေထဲမှာ အမြဲတမ်းပါဝင်ခွင့် [ပုဒ်မ-၁၀၉(ခ)၁၄၁(ခ)၁၆၁(ဃ)] တွေနဲ့ ထိန်းထားရင်ဖြင့် တစ်တိုင်းပြည်လုံးငြိမ်ဝပ်ပိပြားကောင်းရဲ့ဟု ယူဆထားခဲ့ပုံပေါ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုစဉ်းစားချက်ထဲတွင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ထည့်သွင်းသုံးသပ်ခြင်းမပါဝင်ခဲ့ဟု ယခုသော် မြင်နေရပြီဖြစ်ပါသည်။ ဆက်ပြောရလျှင် ၁၉၆၀ ရွေးကောက်ပွဲမှ တည်မြဲ-သန့်ရှင်းတို့၏အခြေအနေကိုမူ ပို၍ပင် သုံးသပ်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ အမြဲတမ်းရှုံးနေသည့် Game တစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကစားနေသည့်သူလိုဖြစ်နေပါသည်။ ခတ်တာက ရှုံးဖို့အခြေအနေကိုဖန်တီးခဲ့သူမှာလည်း ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်သလို တစ်ခါလည်းမဟုတ်တော့။ ယခုသော် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်မှ သွေးရူးသွေးတန်းလုပ်ရပ် နမူးနထိုင်းအပြောအဆိုများဖြင့် ပြောဆို လှုပ်ရှားလာကြပြန်၍သာ ယခုလို ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုလည်း PR ကိုရွေးကောက်ပွဲစနစ်တစ်ရပ်အဖြစ် ဇွတ်လုပ်တော့မည့်အရေးကို မြင်နေရပြီဖြစ်ရာ အရင်လိုပဲ သွေးရူးသွေးတန်း လုပ်နေကြဦးမည်လား မေးလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် PR မှ PR ဇွတ်သမားများကိုပြောလိုသည်မှာ—-။
။။၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ရမည်ဆိုသည်ကိုကော သိထားပြီးပြီလား။
(သိပြီးသား။ အာဏာရပါတီက လွှတ်တော်မှာ Majority မို့ ပုဒ်မ-၄၃၆(ခ)နဲ့ အသာလေးဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရာမှာလည်း ကိုယ်ပြင်ချင်တဲ့ PR နဲ့ပတ်သက်တာပဲပြင်မယ်လုပ်နေချိန်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်ဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်လာသူတွေကလည်း သူတို့ပြင်ချင်တဲ့ ပြည်သူတွေပြင်ချင်တဲ့ ၅၉(စ)တို့ ၄၃၆ တို့နဲ့ပတ်သက်ရင် ပြင်နိုင်ဖို့အတွက် အညှိမခံနဲ့ ငါတို့က Majority ပဲ။ သူတို့တင်ရင်ပယ်သာချ။)
။။တိုင်းပြည်တစ်ခု ရွေးကောက်ပွဲစနစ်နှစ်ခုရှိနေသည်မှာ ဖြစ်သင့်သည်ဟု ယူဆ၍လော။
(ပြည်နယ်တွေက PR ကိုကန့်ကွက်တာမို့ (ပြည်မကပါတီကန့်ကွက်လည်းဂရုစိုက်စရာမလို) ပြည်နယ်မှာ PR မလုပ်နဲ့။ ပြည်မမှာပဲလုပ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်။)
။။လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲစနစ်အတွင်းမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ပြည်သူတို့၏ပဋိညာဉ်ပျက်သွားမည်ကို သိထားပြီးပြီလား။
(PR စနစ်အရဆိုလျှင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ပြည်သူတို့တွင် စည်းနှောင်အားမရှိတော့ပါ။ တာဝန်ခံစရာ တာဝန်ယူစရာလည်းမလိုတော့ပါ။ ရွာကျောင်းကလေး၊ လမ်းကလေး၊ ဆေးခန်းလေး၊ တံတားလေးပြင်ဖို့၊ အသစ်လိုချင်လို့ဆိုသည့် ကိစ္စမျိုးပြောရန်၊ နေရာတို့မရှိတော့) စဉ်းစားမိသမျှ သွေးရူးသွေးတန်းဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပါသည်။ ထိုထက်လည်းပိုနိုင်ပါသေးသည်။
ထို့ကြောင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ဗိသုကာကြီးကိုမေးလိုပါသည်။ ၁၄ နှစ်ကြာ ကိုယ်တစ်ဦးတည်း စိတ်တိုင်းကျလုပ်ထားသော ဆန့်ကျင်သူတွေဝင်မလာနိုင်ရေး၊ ဝင်လာခဲ့လျှင်လည်း အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်ဖို့ သတ်ကွင်းများဖော်ထားသည့် အခြေအနေထိ လုပ်ထားသော်လည်း ယခုလို မလိုလားအပ်သူများ လွှတ်တော်ထဲရောက်လာသည့်အပြင် နောက်ထပ်နယ်မြေများတိုးချဲ့လာတော့မည့်အရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက မကာကွယ်နိုင်တော့ပြီဖြစ်ရာမှ ကြံရာမရဖြစ်ပြီး မိမိရေးဆွဲခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံကိုဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ရပ်များဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်ပင်ပြန်လည်ချိုးဖောက်ရသည့်အဖြစ် ရောက်နေသည်ကိုကော သိရှိပါရဲ့လားဟုမေးလိုပါသည်။
ယခုလွှတ်တော်ထဲရောက်နေသည့် အာဏာရပါတီ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ပုဒ်မ-၃၉၆(ခ)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်သော “သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်၏ မူလမဲဆန္ဒရှင်များအနက် အနည်းဆုံး တစ်ရာခိုင်နှုန်းတို့က တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ပတ်သက်သည့် တိုင်တန်းချက်ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ တင်ပြရမည်” ဆိုသည့် Right to recall အခွင့်အရေးအရ ပြည်သူတို့ကအလွယ် တောင်းဆိုလာမှာစိုး၍ အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်ပြင်ဆင်ရေးကို မခိုင်မာသည့်အကြောင်းပြပြီး Pending လုပ်ထားခဲ့သော်လည်း လူဦးရေမည်မည်ရွှေ့မည်မျှလောက်က လက်မှတ်ထိုးတင်ပြသည်ဆိုသည့် အမျိုးဘာသာဆိုင်ရာ ဥပဒေလေးမျိုးကိုမူ ဖုန်မခါ ရေမဆေး ရေမသုတ်ဘဲ အရိုးပဲစူးစူး လည်ချောင်းပဲနင်နင် ကောက်မြိုချလိုက်သလို လုပ်ရပ်မျိုးကဖြင့် ဣနြေ္ဒမဲ့လွန်းလှပြီး လွှတ်တော်သိက္ခာလည်း တစ်ပြားသားမှမရှိတော့သည့် လုပ်ရပ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
ယခုလည်း သွေးရူးသွေးတန်းဖြင့် PR စနစ်ကိုလက်ခံဖို့ ကြံရွယ်လုပ်ဆောင်လာလာသည်ဖြစ်ရာ PR စနစ်၏ဖြစ်လာတန်ရာသော၊ ရိုက်ခက်တန်လာရာသော တန်ပြတ်ရိုက်ချက်များကိုဖြင့် ကြိုတင်စဉ်းစားထားဖို့လိုပါမည်။ နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ဆိုသူတို့၏ စကားများအရမူ ပြင်ဆင်ထားပုံမရပါ။ သူတို့၏ အရေးအပြောများအရ PR စနစ်မှာ ရွေးချယ်ပြီးသား ဆုံးဖြတ်ပြီးသားကိစ္စတစ်ခု၊ ဤအတိုင်းပင်သွားရမည်။ လက်နက်ရှိနှင့် လက်နက်မဲ့တွင် လက်နက်မဲ့သူကသာနာမည်။ နောက်ဆုံးလုံးဝခံရသူမှာ ပြည်သူတို့သာဖြစ်မည် ဆိုသောစကားမျိုး၊ အရေးအသားမျိုးများသာ ကြားနေဖတ်နေရရာ ဤမျှနှင့်သော် မရနိုင်သေးဟု မြင်ပါသည်။
လက်နက်ရှိသူနှင့် လက်နက်မဲ့သူဟု သုံးနှုန်းသူတို့အတွက်ပြောလိုသည်မှာ လက်နက်ကိုင်ထားသူ၏ အမြှော်အမြင်ကြီးမှု ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့် သဘောထားကြီးမား ရင့်ကျက်ပြည့်ဝမှုကသာ တရားမျှတမှုနှင့် ဓမ္မကိုဖော်ဆောင်နိုင်ပေမည်။ ပညာမဲ့သူ ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိသူတို့လက်ဝယ် လက်နက်များရှိနေပါမူ နွားကျောင်းသားလက်ဝယ်ရောက် လောက်လေးခွသဖွယ် တစ်ရွာလုံးအေးချမ်းတော့မည်မဟုတ်ပေ။ ယခုဤနိုင်ငံတွင် လက်နက်ရှိသူတို့သည် မည်သို့သောအမျိုးအစားပေနည်း။ အကြံပေးကြီးတို့ကတော့ ပြောနိုင်အံ့ထင်သည်။ နီးစပ်သူတွေပဲကိုး။
PR ကိုဇွတ်တွန်းရန် ကြံနေသူတို့အား တစ်ခုပြောလိုပါသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံသည် မူလဒီဇိုင်းက PR အတွက်မဟုတ်ပါ။
FPTP အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် လွှတ်တော်ထဲရှိ Majority ကိုထိန်းညှိရန်အတွက် စစ်တပ်မှ ၂၅% ကို နေရာယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ PR စနစ်အရဆိုလျှင် စစ်တပ်ကလွှတ်တော်ထဲဆက်နေရန်ပင် အကြောင်းမရှိပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Majority ကိုရဖို့ရန် ပါတီတစ်ခုအတွက် မလွယ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဖြင့် စေ့စပ်သေချာလွန်းလှသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ဗိသုကာကြီးကိုတော့ဖြင့် မေးလိုပါသည်။ ၂၅% မှ ဘယ်အထိလျော့ချမည်နည်း။ အဝက်သားအထိလော၊ တစ်ဆယ်သားအထိလော။
ယခုမကြာမတင်ရောက်ရှိလာတော့မည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် PR စနစ်ကို စတင်ရန် လိုလားနေသူများကို သတိပေးလိုပါသည်။ PR ကိုဇွတ်ကျင့်သုံးရန်ကြိုးစားသလို လွှတ်တော်တွင်းမှ စစ်သားရာခိုင်နှုန်းကို ဘယ်လောက်အထိ လျှော့ချပေးနိုင်မည်ဟု ဂတိပေးနိုင်မည်လဲ။ PR အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ရလျှင်ဖြင့် ၂၅% ကိုလည်း တစ်ဆက်တည်းပြင်ရမည်၊ ပြင်သင့်သည်ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုတော့ဖြင့် သတိပေးလိုပါသေးသည်။ PR စနစ်ကို တိုင်းမှာကျင့်သုံး ပြည်နယ်မှာမကျင့်သုံးစသည်ဖြင့် ကိုယ်အသက်ရှုဝဖို့အရေး မှန်/မှား၊ တရား/မတရား၊ ဓမ္မ/အဓမ္မစသည်တို့ကို ဂရုမပြုမိတော့ဘဲ ဂမူးရှူးထိုးဖြစ်နေသည့်တိုင် ထိုမဲပေးစနစ်များကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည့် ပြည်သူတို့၏ သဘောဆန္ဒများကိုတော့ တောင်းခံသင့် တောင်းကြည့်သင့်ပါသေးသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၄၃၆(ခ)အရ မလိုအပ်ဆိုလျှင်သော်မှ ပြည်သူ့အသံ လွှတ်တော်အသံ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ လွှတ်တော်ဆန္ဒဟု ဆိုခဲ့သူများ ကိုယ်ရေးခဲ့သည် ပြောခဲ့သည်များကို မေ့နေမည်စိုး၍ ထောက်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံး၏နောက်ဆုံးအနေဖြင့် တစ်ခုကို ပြည်သူများဘက်မှ သတိပေးလိုပါသေးသည်။ အကြံပေးစာရေးဆရွာကွန်မြူနစ်ဇာတ်ပျက်ဖောက်ပြန်ရေးသမား၏ စကားအရ လက်နက်ရှိနှင့် လက်နက်မဲ့မို့ လက်နက်မဲ့သူများလက်မှပြောသံများဟု ယူလိုသော်ယူပါ။ လွှတ်တော်တွင်းတွင် ပြည်သူတို့လိုလားသော ပုဒ်မ-၅၉(စ) ပြင်ဖို့ဝေလာဝေး၊ ၄၃၆ ကိုယ်လည်းမပြင်၊ ကျန်တိုင်းရင်းသားများလိုလားသည်ကိုလည်းမပြင်၊ ၂၅ လည်းမလျှော့၊ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း လွှတ်တော်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့လိုလားသည့်အတိုင်း PR စနစ်ဖြင့်လုပ်မည်ဆိုပါစို့။ ရွေးကောက်ပွဲတို့၏ထုံးစံအတိုင်း ပြည်သူတို့လိုလားသောပါတီက လွှတ်တော်တွင်းတွင် Majority ရခဲ့ပြီဆိုပါက ဘာလုပ်မည်နည်း။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ဗိသုကာကြီးဘယ်ပုံဖြေရှင်းမည်နည်း။ သိလိုပါသည်။ လုပ်နေကျအတိုင်း ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲလို လုပ်လိုက်တာပေါ့ဟု ရူးသလိုကြောင်သလိုဖြင့် လုပ်နေဦးမည်လော။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ဗိသုကာကြီးသိရန်မှာ လွန်ခဲ့သည့် ၁၉၈၈ က ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဗိသုကာကြီးကြုံခဲ့ရသည့် မချိတင်ကဲဖြစ်ရပ်များနှင့် တစ်ဖုံဆင်ကွဲပုံစံများဖြင့် မကြုံတွေ့စေလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်း ပြည်သူ့ဘက်မျက်နှာမမူနိုင်ခဲ့ပါ။ ယခုအဖြစ်က ထိုစဉ်ကထက်ပို၍ဆိုးရွားပါသည်။ ပြည်သူကိုမျက်နှာမမူလျှင်ဖြင့် သမိုင်းကရပ်တံ့မနေ တိုက်စားချေမှုန်းသွားမည်သာဖြစ်ရာ…။
သြော်…တပ်မတော်ကြီးရှိနေတာပဲ ပထမအာဏာရှင်ကြီးက ထိုစဉ်ကကာချုပ်ကိုပြောခဲ့သလို မင်းတို့စစ်တပ် တပ်မတော်ကဝင်လိုက်ကွာ ဟုပြောဦးမည်လား။ ဒိုင်ကိုင်မည်ဆိုလျှင် အနည်းဆုံး ဖဲတော့ဝေတက်မှဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ နေရာတိုင်း အယူချည်းပဲဆိုလျှင်ဖြင့် ကိုယ့်ရပ်တည်ဖို့ရာ အတွက်ပင် ခက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကနဦးသူတို့၏ အရည်အချင်းမှာဘာလဲ၊ မကြာခင်တွေ့ရတော့မည် ထင်သည်။
” နိုင်ငံရေးမှာ တိုက်ဆိုင်မှု မရှိကောင်းလေ..။ ”
အဲဒီစကား အမှန်ဆုံးဘဲ ဦးကြောင်ကြီးရေ။
ပီအာက..အတည်ဖြစ်တာ/မဖြစ်တာထက်.. ခုလောလောဆယ်..ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်တော့ဘူးကြေငြာလိုက်သမို့.. ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲတောင်လုပ်ပါ့မလား.. တွေးနေမိတယ်..။
အခြေအနေမကောင်းရင်.. ဘွာတေး.. ၂၀၁၆လောက်.. ၂၀၁၇လောက်.. ဆိုတာမျိုး..။
ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့.. မြန်မာ့အခြေခံဥပဒေဆိုတာကြီးကို.. ရှေ့က၂ခုလွယ်လွယ်ဖျက်ပြပြီးကတည်းက.. ၃ခါဖျက်ဖို့.. ၀န်လေးကြမှာမဟုတ်လို့.. တွေးနေပြီးသကာလ.. ယုံလို့ကို… မရ..။
အဲဒီအပေါ်မှာ အလုပ်ရှုပ်ငြင်းခုန်.. ငွေကုန်.. အချိန်ကုန်နေကြမယ့်အစား.. တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်သာ.. ဦးထိပ်ပန်ဆင်.. လုပ်စေချင်..။
အခု ဘပြောင်လုပ်ချက်လို..ဥရောပက…ဂျပန်က.. အကြွေး ဒေါ်လာ ဘယ်နှစ်ဘီလီယန်..လျှော်ပေးလိုက်တယ်…။
ဒေါ်စုပါဝါကြောင့်လို.. အမေရိကား..ဥရောပက.. ရင်းနှီးမျြုတ်နှံမှုတွေဘယ်လိုဝင်လာတယ်..
ဂျာမနီက ၁၇၅၆ ခုနှစ် ဗြိတန်အင်ပါယာ၏ ဂျော့ဘုရင်(၂)သို့ အလောင်းမင်းတရားကြီးက ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ရွှေပေလွှာကို ဂျာမနီ စာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်သော Gottfried Wilhelm Leibniz နဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့က 3D ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် မိတ္တူကူးပြီး မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံ ပေးအပ်လိုက်တယ်တဲ့။
အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့ ရွှေပေလွှာမိတ္တူတော့ ရခဲ့ပြီပေါ့ သဂျီးရေ။
ဘပြောင်က ခုပြောနေပြီ ဆန္ဒရှိရင် သူက နှလုံးစက်တပ်ထားလဲ နောက်နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးအုန်းမှာတဲ့
ထပ်တပ်လို့ မရတဲ့ ၂ လုံးမရှိရင် ဘာမှ လုပ်မရပါဝူးးး
ဥမပါ (အဲ) ဥပမာ မျက်လုံး ၂ လုံး ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့က တဗိုလ်ဆင်း တဗိုလ်တက် အလျှော့ပေးမယ်များ ထင်လို့လား
အဲလို တစ်ဗိုလ်ပြီး တစ်ဗိုလ် တက်ချင်လို့မှ မွေးထားတာလေ။
စု ခြေရာကို နင်းမဲ့သူ မရှိဘူး ဘာဘူး ပြောရင် စိတ်တိုတယ် ဆိုတာ အဲဒါလေ။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ သူ နေရာ ဆိုတာ အစားထိုးမရဘူးး။
အဲဒီလူ အသက်ရှင်တုန်း လုပ်နိုင်တုန်း အားပေးရတာ။
စု ကိုရှေ့ထားပြီး အရှေ့ကို မျှော်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အပြစ်တင်နေတဲ့သူတွေဆို တိတ် တောက်ညင်ကပ်တယ်.။
နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် အရည်အသွေးအစစ်ဆိုတာ စစ်ဗိုလ်တွေမွေးသလို မွေးထုတ်လို့ ရတာမဟုတ်ဘူးးး
နောက်က ဆက်ခံမဲ့သူ အဆင်သင့်ဖြစ်တာဆိုလို့ အမိန့်နာခံတတ်တဲ့ စစ်အစိုးရပဲ တတ်နိုင်မယ်။